Nadiifinta wajiga ee ragga: tilmaamaha iyo tabaha ugu wanaagsan | Ragga Stylish
Nadiifinta wajiga ee ragga
In kastoo aysan u muuqan mid muhiim ah, ragga sidoo kale waa inay lahaadaan nadiifin wajiga oo sax ah. Waa mid ka mid ah talaabooyinka maalinlaha ah ee ugu muhiimsan nolol maalmeedkeena haddii aan dooneyno inaan si wanaagsan u daryeelno maqaarkayaga. Maqaarka maqaarku wuxuu la kulmaa wasakh, bakteeriya ka timaada wasakhda deegaanka wuxuuna bilaabaa inuu soo saaro sebum ku urura dusha sare. Sidaa darteed, ka nadiifinta wajiga ragga aad ayey muhiim u tahay haddii aan rabno in maqaarkeenna si wanaagsan loo daryeelo.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax walboo aad u baahan tahay inaad ka ogaato nadiifinta wajiga ee ragga iyo sida ay tahay inaad u sameyso.
1 Nadiifinta wajiga ee ragga
3 Nadiifi wajiga ragga
3.1 Nooca maqaarka
Nadiifinta wajiga ee ragga kaliya ma caawineyso in laga takhaluso wax kasta oo wax u dhimaya maqaarkayaga, laakiin sidoo kale waxay ka caawineysaa ka hortagga jabitaanka iyo daloolada xirmay. In kasta oo aan nadiifinno wajigeena maalin kasta markaan soo kacno, ma aha sida ugu saxsan ee loo sameeyo. Haddii maqaarku leeyahay jajab, waa caajis ama ma aha mid biyo ku filan Waxay noqon kartaa qalad la'aanta nadiifinta wajiga oo wanaagsan. Waxaan arki doonnaa maxay yihiin dhinacyada aasaasiga ah ee ay tahay in lagu xisaabtamo nadiifinta saxda ah ee wajiga.
Si aad u dhaqdo wajigaaga waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Wejigaaga ku masax isla saabuunta loo isticmaalo jirka ama gacmaha.
Ku mayr saabuunta hoostiisa durdur biyo kulul
Ku xoq wejigaaga tuwaal
Habkani waa mid ka mid ah nadaafadda wajiga ee ragga loo isticmaalo, in kasta oo si fiican loo caddeeyay, haddana ma aha sida saxda ah ee maqaarkayaga loo daryeelo. Sababta tan ayaa ah in baakada saabuunta ee aan u isticmaalno jirka ay leedahay alkaliin sare, halka midabkeenna uu wax yar acidic yahay. Kala duwanaanta pH-da ayaa muhiim ah tan iyo markii ay alkaliinku abuuri karaan bakteeriya keena finanka, iyo waxyaabo kale. Alkalin-ka ayaa sidoo kale maqaarkayaga ka dhigi kara mid xoogaa qalalan oo kacsan.
Saabuunta jirka ayaa maqaarka ka duubi kara saliidaha dabiiciga ah habka loo miisaamo saliidaan lumisayna waa in la soo saaro xitaa saliid dheeri ah. Tani waxay keenaysaa in wejigeennu dhammaado oo u ekaado dufan wuxuuna u nuglaanayaa jajabka finanka. Sidoo kale waa inaan maanka ku hayaa inay jiraan noocyo badan oo maqaarka iyo saabuuno ah. Qaarkood waxay si fiican ugu shaqeeyaan dad gaar ah qaarna uma shaqeeyaan. Haddii aad qalasho oo aad u qallafsan tahay ama aad u adag tahay ka dib markaad wajiga maydho, markaa waxaad u isticmaali kartaa nadiifiyaha qaldan wajigaaga.
Hal shay oo aad sameyn karto ayaa ah inaad hubiso haddii shey cayiman kuu fiican yahay. Tijaabadu waa mid ku lug leh in yar oo saabuun ah ama nadiifiye looga tago maqaarka oo loo daayo xoogaa fadhiisasho ah. Haddii muddo ka dib ay sababto qaar nooca guduudasho, cuncun ama finan, sheygu kuma haboona nooca maqaarkaaga.
Waxaa jira waxyaabo kale oo lagu beddeli karo saabuunta waana laga yaabaa inay tahay tan ugu muhiimsan. Saabuunada qaar ayaa ka sii adag oo waxa ku jira maaddooyinka lagu nadiifiyo ayaa ah inay ka xanaajin karaan maqaarka wajigeenna. Sidaa darteed, waa wax xiiso leh in loo isticmaalo nadiifinta khaaska ah ee nadiifinta wajiga ee ragga. Saabuunta caadiga ahi way qallajiso maqaarka maqaarka waxayna ka dhigtaa xiirashada mid aan raaxo lahayn. Waxa ugu caansan waa in loo maleeyo in xiirashada ay xanaajiso maqaarka waxaana sababa caleemaha tayada liita. Si kastaba ha noqotee, waa habka aad u nadiifiso naftaada taas oo ah dambiilaha dhabta ah ee dhibaatooyinka maqaarka.
Waxaa jira nadiifiyeyaasha wajiga ama biyaha micellar Waxay ku yimaadaan qaab dareere ama jel ah waxayna abuuraan xumbo si ay u duugaan wejiga qoyan una sameeyaan nadiifinta wajiga saxda ah.
Nadiifi wajiga ragga
Tani waa mid ka mid ah sababaha ay tahay inaan u isticmaalno alaabtaan halkii aan ku dhaqi lahayn jirka. Waana taas, kaliya ma aha inay ka saaraan wasakhda iyo dufanka dheeriga ah ee wejiga, laakiin sidoo kale waxay wejigayaga uga tagayaan dareen nadaafadeed oo aan ahayn qallal. Tani waxay sabab u tahay, qayb weyn, xaqiiqda ah in pH-da alaabtu ay u dhigantaa tan maqaarkayaga. Kuma dhacdo sidii saabuun dhaqameed.
Sidoo kale waa lagama maarmaan in la caddeeyo taas biyaha micellar waxay ka adkaadaan jelladaha nadiifinta ama xumbo. Sababta ayaa ah in biyaha micellar-ka ay inta badan ka jilicsan yihiin maqaarkayaga umana baahna wax mayrin. Waa inaan xasuusnaano in biyuhu qallalaan tiro aad u tiro yar iyo sida yar ee aan u isticmaalno biyo si aan wejiga u maydho, ayaa ka sii fiican. Biyaha Micellar waxay qabtaan isla shaqo, laakiin waqti aad u yar oo natiijo fiican leh.
Waxaan kaala hadli doonnaa talooyin qaar ka mid ah si aad u doorato kan ugu fiican nadiifinta wajiga ee ragga. Nadiifiyeyaasha oo dhami isku mid ma aha ama isku sifooyin ma leh. Waa inaad tixgelisaa qodobbada kala duwan si aad u doorato nadaafadda ugu fiican:
Waxaa jira 5 nooc oo maqaar ah waana kuwa soo socda: saliid leh, xasaasi ah, caadi ah, qalalan oo isku qasan. Haddii aad leedahay maqaar dufan leh, waxaad u badan tahay inaad haysatid baallo waaweyn oo muuqda. Waxaad sidoo kale ogaan doontaa dhalaalka dufanka badan. Halkan waa inaad doorataa biyo micellar ah oo nidaamiya soosaarka dufanka.
Haddii aad leedahay maqaar qalalan waa inaad doorbidaa xoogaa saabuun dhaqe ah waxay tahay inay qabtaan shaqo fiican oo ah inay ka saaraan wasakhda iyo nijaasta. Maskaxda ku hay in waxyaabahan wax lagu nadiifiyo aysan ka dhigi karin epidermis-ka inay lumiyaan saliidaheeda dabiiciga ah. Xaaladahan oo kale, aloe vera iyo oatmeal waa kuwo si fiican u waraabiya oo dejiya. Dhinaca kale, haddii aad leedahay midab xasaasi ah oo si fudud hodan ugu ah xiirashada ama nadiifiyeyaasha kale, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho alaab ay ku jiraan waxyaabo dabiici ah. Ka fogow dhammaan alaabadaas ay ku jiraan glycolic acid. Saliida saytuunka iyo aloe vera waa kuwo fiican.
Haddii maqaarku isku qasan yahay, waxay ka dhigan tahay inaad yeelanayso meelo wajiga ka mid ah oo dufan leh iyo kuwo kale oo ka sii qalalan. Nadiifiyeyaashaas leh aloe vera, dhuxul firfircoon, iyo saliidda saytuunka waa inay noqdaan xulashooyinka ugu sarreeya. Ugu dambeyntiina, haddii aad leedahay maqaar caadi ah, uma baahnid inaad wax badan ka walwasho. Waxaad dooran kartaa biyo micellar kasta oo leh tayo iyo taas aan si gaar ah loogu jeedin ragga leh maqaar dufan leh ama qallalan.
Waxaan rajeynayaa in xogtaan aad waxbadan kaga baran karto nadiifinta wajiga ragga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Nadiifinta wajiga ee ragga
Suudhka arooska madow